निबन्ध | Lekha Rachana
sulav १३ बैशाख २०७५, बिहीबार ०७:४४
भर्याङको दुइ परिभाषा खोजे । मान्छेले भर्याङ उक्लिन र ओर्लिन बनाउछन, यो आवस्यक्ताको कुरा हो तर मान्छेले मान्छेलाई भर्याङ बनाउनु चाही कुन परिभाषा हो ?
पटमुर्खहरु, जुन तहमा टेकेर सतहमा पुग्छौ नि त्यहाँ अकाल्लिदो भुमरी छ , तिमीहरुले नै फेर्ने सासको । एस्तै मान्छेले नै मान्छेलाई खेलौना सोच्ने हो ।एउटा बिग्रे पछी अर्को या एउटा हुँदा हुँदै अर्को,के गर्ने नयाँ नै रहेछ पुरानो हुने ।
एस्ताले खेल्न पनि मान्छेनै खेल्छन्, मार्न पनि मान्छेनै मार्छन । यहाँ कती आत्मा हत्या हरुको कथा लेखिएको छैन, बलत्कारी हरुको बल छिण भएको छैन, फटहा हरुको छाला फटाइएको छैन, घुस्घुसे हरुको फुर्ती फडारिएको छैन, गफाडिहरुको गफ छाटिएको छैन, बिधुवाको पसिना लेखिएको छैन, योवनको यमरी पकाइएको छैन, पैसाको गुलामी सकिएको छैन, नेताको कुर्सी भाचिएको छैन । धर्मको आढमा दुधको बाढ छ ल भन पानी सकियो कता त ?
स्वतन्त्रताको कुरा गर्ने मान्छे आफै भित्र कैद छ,मन मनै बोल्छ कती प्रस्ट सुन्छ,के रे भन्देउ त, हड्बडाउछ ।त्यो मनको खिचडी खानपाए साच्चै नै मिठो हुन्छ होला ।
अवसरवादिको चै दुइटा भर्याङ हुन्छ । एउटा घरको भर्याङ अर्को मान्छेको भर्याङ ।यिनुहरु आफुलाई सियो र सम्ब्न्धलाई धागो परिभासित गर्छन । बिरोधाभाष यिती नभएका यि गहुरुपी आदर्शवादी अ व स रि हरु सम्ब्धका क्यान्सर हुन बिबेकमा लागेका एड्स हुन ।यिनिहरुको न औसदी छ न उपचार ।
यिनिहरुको फेरी हाइ बृड बढेर घट्ना बढ्दो घटिरको छ ।सुसाइड्,मर्डर्,किड्नेप्,सेक्स स्केण्डल्,साइकोलोजिकल ट र च र
,डिवोर्स्,प्लान्ड एक्सिडेन्ट मर्डर्,सिरिएल किलर । भयङ्कर हो परिभाषाको निचोड्,मान्छे रुपी भर्याङ्को परिभाषाको निचोड ।
डि.यन.ए को खेल छ साथी मान्छेको मान्छेनै बच्चा हुन्छ ।हजारौ आजै जन्मिसके । कती भाज्ञयमानी हुन्छन आमा बाबु दुइटै हुन्छन्, कतिको भाज्ञय मात्र हुन्छ आमा मात्र हुन्छन र कती को बाबु मात्र हुन्छन र मान मात्र पाउछन । आमाको फेरी अर्को लोग्ने हुन्छ,बाउ को फेरी अर्को स्वास्नी हुन्छ । छोरिले सिक्ने पनि आमाको, छोराले सिक्ने पनि बाउको । बाउले जाड खान्थ्यो छोरो हुटिट्याउ भएर हिड्छ आमाले चमेली रोपी छोरी सिउरिएर हिड्छे।
२८ चैत्र २०७६, शुक्रबार ०६:४४
१२ जेष्ठ २०७६, आईतवार ०७:२८
साहित्य आविश्कार हो र लेखक वैज्ञानिक हुन
८ जेष्ठ २०७६, बुधबार ०५:३९
बा द र कै अनुहार
२३ बैशाख २०७६, सोमबार ०९:०७
मेरा शब्दहरु मेटिएछन
८ जेष्ठ २०७६, बुधबार ११:२७